Madaxweynaha Maamulka koonfur galbeed oo taageeray Xulufada Sacuudiga Oo Laga Soo Horjeestay | Caasimada Online
Madaxweynaha Maamulka koonfur galbeed oo taageeray Xulufada Sacuudiga Oo Laga Soo Horjeestay
Kulan ay Maanta ku yeesheen Magaalada Bydhabo ee Xarunta gobolka Baay Golaha la maagc baxay Golaha badbaadint koonfur Galbeed ayaa waxa ay kaga dhawaqeen in ay kaas oo horjeedeen talaabadii Maamulka konfur Galbeed uu ku taageerada Xulufada Sacuudiga.
Kulanka oo ay Warsaxaafadeed kas oo saareen ayaa waxa ay sheegen in Go’aanka uu qaatay Shariif Xasn Sheekh Aadan Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu yahay mid uusan ku metelin Koonfur Galbeed.
Sidoo kale waxa ay shegeen Golahaan in tani u jeedada uu la leeyahay Shariif Xasan ay tahay sidii uu dhaqaalo uga heli lahaa isla markaana waqtiga uu ku dheereysanyo sida ay hadalka u dhigeen.
halay ayaa Warsaxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaa lagu sheegay in lagu taageeray Go’aankii ay horay u qaateen Xulufada Sacuudiga kaas oo ahaa in xiriirka loojaray dowladda Qatar.
Warmurtiyeedka ay soo saareen oo ka koobnaa qodobo dhowr ah ayaa waxaa Saxaafada u akhriyay gudoomiye ku xigeenka Koowaad ee Golaha badbaadada koonfur Galbeed Soomaaliya Aadan Maxamed nuur Sarsansoor..